Isiselo sokusasaza samanzi → Indlu
Ngaba uyayifuna into yokuhambisa amanzi ekhaya? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Dom yindawo apho sichitha khona ixesha lethu elininzi. Sifuna ukuziva kamnandi kwaye sikhuselekile apha. Kulapha apho silungisa izidlo, siphumla kwaye sihlala sisebenza. Yonke imihla ekhaya, kunye nosapho kunye nabahlobo, sisela iiglasi zamanzi ezininzi. Ke silindele amanzisisebenzisa sicocekile kwaye sisempilweni kwaye sinencasa eyahlukileyo. Intuthuzelo kunye nokulula kokufumana amanzi anjalo kuya kubonelelwa kuthi indawo yokusela yokuhambisa amanzi.
Ukufikelela rhoqo kumanzi acocekileyo avela kumgqobhozi, ongenasiphazamiso sentsholongwane kunye neekhemikhali, kuya kusivumela ukuba sihlale sisempilweni ixesha elide kwaye ukongeza ukhathalelo lwendalo yethu ngokunciphisa isixa senkunkuma, i.e kusetyenziswa kwaye alahla iibhotile zamanzi.
Isicoci samanzi esisebenzayo nesisetyenziswayo sanamhla oku kubalulekile ekhaya kwaye senza ubomi bube lula, kuba akukho mfuneko yokuthenga amanzi ebhotile kwaye emva koko uchithe amandla anawo. Ukucutha isixa senkunkuma eveliswe endlwini yethu nayo yinto ebalulekileyo yokunyamekela indalo.
Ukusela rhoqo amanzi acocekileyo kunye acocekileyo kuphucula impilo yethu kwaye kuphuhlisa iindlela ezifanelekileyo zokutya kumalungu osapho amncinci.
Ngombulelo kwi-dispenser yamanzi okusela, unokulungiselela kungekuphela nje amanzi amnandi, kodwa kunye nokuvuselela i-lemonade okanye amanzi aqabulayo, kwaye uyilo lwangoku lwesixhobo luya kugxininisa ukubonakala kwalo naliphi na igumbi.
Ukuhambisa amanzi emzimbeni kuphucula ukumelana komzimba nezifo, kubandakanya izifo, kuba izifo ezithintelwe ngokwasemzimbeni, impumlo kunye nomlomo zenza isithintelo esisebenzayo sezinto ezincinci zentsholongwane ezihlasela thina. Ukusela amanzi asempilweni kwaye acocekileyo nako kunefuthe elihle ekubonakaleni kolusu lwethu kunye nokulibaziseka kwinkqubo yokuguga kunye nokubonakala kwemibimbi. Ukuhambisa amanzi ngokufanelekileyo emzimbeni kuchaphazela ulusu olufanelekileyo lwesikhumba, olukhusela umzimba wethu ngendlela yendalo.
Amanzi asemzimbeni wethu:
-Ukuphela kwesondlo esibonelelwa kwimizimba yethu kunye nokutya
-into eyinxalenye yezicubu zethu
-okulawula ukusebenza kakuhle kwamalungu, kubandakanya nengqondo
-umlawuli wobushushu bomzimba
Ngale nto engqondweni, khumbula ukusela malunga neelitha ezimbini zamanzi ngosuku. Kubaluleke kakhulu kubantu abathatha amayeza kwaye bahlupheke kwiimeko ezahlukeneyo zonyango.
Kwelinye icala, isidingo samanzi abantwana kwiintsana kunye nabantwana abancinci sikhulu ngakumbi. Abantwana kufuneka basele amanzi amsulwa angenazimbiwa zininzi ngaphandle kweswekile, incasa kunye nedayi.
Ezi zizathu zokuba kutheni kufanelekile ukuba ucinge ngokuthenga iselisi yamanzi okusela ekhayeni lakho okanye eflethini, kuba iqinisekisa ukufikelela rhoqo kumanzi acocekileyo nasempilweni. Iya kuba yinto esebenzayo kakhulu yezixhobo zasekhitshini.
Iziphuzo zokuhambisa amanzi zivumela ulungiselelo olusempilweni lokutya kunye neziselo kusapho lonke. Ezi zixhobo ziya kusetyenziswa ngokulula nangokuthandekayo ngumntu wonke, nelona lungu lisencinci losapho, kuba ziphawuleka ngokusebenza kunye nokuqina.
izixhobo zokuhambisa amanzi ezingezi-silindaAmanzi ashushu asendlwini kwindlu yentsapho enyeamanzi ashushu endliniamanzi acocekileyo empompoamanzi asimahla ekhayaamanzi asekhayaisitshisi samanzi sasekhayaixabiso lokuhambisa amanzi ekhayauphononongo lwamanzi okuhambisa amanzi asekhayaisitshabalalisi samanzi seWarsaw yasekhayaIsicoci samanzi esitshixwayo ekhayeniIsithambisi sokuhambisa amanzi ekhompyuterisitshisi samanzi sasekhayaisitshabalalisi samanzi kwigumbi lokuhlalaizindlu zokusela amanzi okuselaamanzi okuhambisa amanzi entwasahloboamanzi eekhabhoniamanzi e-carbonated ekhayaamanzi ashushuUlawulo lwamanzi ekhayaokwahambisa amanzi kwindluamanzi athambileyo ekhayangqo kwimpompoamanzi anzima endlininamanzi akho ekhayaamanzi ukuya endlwiniamanzi aqabukayo ekhayaamanzi amaminerali ekhayaukusela amanzi ekhayaamanzi athengisiweyo ekhayaamanzi okusela ekhayaamanzi endlwiniamanzi kufakelo lwendluamanzi angaphantsi kwindlu entshaamanzi asempilweni ekhayaamanzi empompo asempilweniamanzi abandayoamanzi entwasahlobo yasekhaya